Labo Ra’iisul Wasaare hore oo isu soo taagey doorashada Puntland ee dhowaan dhici doonta – idalenews.com
Dr Cabdiwali Gaas Iyo Siyaasiga kale ee Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, oo labadduna horey ooga soo noqday dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya, ayaa u taagan xilka doorashadda madaxwaynenimo ee maamul ggobaleedka Puntland.
Doorashada ayaa waxay yeelatay xiiso gooni ah kadib markii labadoodaba isku soo sharaxeen xilkaas.
Dhinaca kale waxaa doorashadda madaxtinimadda ee Puntland u sharaxan madaxwaynaha hadda xilka haya Cabdi Raxmaan Faroole iyo aqoonyahanka lagu magacaao Dr Saadiq Eenow oo si weyn Puntland iyo inta badan Somalia.
Kadib muran ka dhashay doorashadda Puntland oo la doonayay in qaab axsaab lagu sameeyo ayaa la go,aansaday in Barlamaanku soo doortaan Madaxwaynaha iyadoo tiradda barlamaanka laga dhigay 90 meesha horrey u ahaan jireen 66 xildhibaan.
Dhageyso Beesha Wacdaan oo wasiirka arrimaha gudaha C/kariim Xuseen ku eedaysay cadaalad daro